Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa soo dhoweeyay is bedelka lagu sameeyay Ciidamada AMISOM – idalenews.com
Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa soo dhoweeyay is bedelka lagu sameeyay Ciidamada AMISOM
Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa soo dhoweeyay is bedelka lagu sameeyay Ciidamada AMISOM ee ku sugnaa Gobolka, iyagoo rajo ka muujiyay in xilligan deegaanada ka maqan gacantooda ay la wareegaan.
Gudoomiye kuxigeenka dhinaca siyaasada ee Gobolka Shabeelaha Dhexe Yuusuf Cabdi Cabdulle ayaa soo dhoweeyay Ciidamada Brundi ee lagu bedelay Ciidamadii Uganda ee ka midka ahaa howl galka AMISOM.
“Waa soo dhoweynaynaa is bedelka lagu sameeyay ciidamada, gaar ahaan ciidamadii Uganda ee lagu bedelay ciidamada Brundi, muddo sanad ayaa soo wada shaqeynay ciidamada Uganda, howlo badan ayay qabteen waa ku amaanan yihiin”ayuu yiri Yuusuf Jaalle.
Sidoo kale Yuusuf Jaalle ayaa sheegay in ciidamada xooga dalka iyo ciidamada ka socda Brundi ay ka wada shaqeyn doonaan sidii ay u gaari lahaayeen deegaanada kale ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
“Nabadiid diidka meelaha uu ku haray waxaa rajeyneynaa inaan ka saarno oo aan ka xoreyno”ayuu yiri Yuusuf Jaalle.
Maalmo ka hor ayay aheyd markii Ciidamada AMISOM ee ku sugnaa Mahadaay ay isaga soo baxeen, waxaana ciidamadaas oo ka socday Uganda lagu bedelay ciidamo Brundi ah, isla markaana ay fariisimo ka sameysteen deegaanka Buurane iyo Mahadaay.
Banaanbax ka dhan ah ciidamada ethopia oo ka dhacay buulo burde gobolka hiiraan ee soo (Sawiro)
Urur Goboleedka IGAD oo ballan qaad u fidiyey dowladda Federalka Ee Soomaaliya.